८२ करोड पुँजी र ३५ शाखा भएको देव: विकास बैंक भएका छौं
शुक्रबार, श्रावन १, २०७२
– तपाई वाणिज्य बैंकमा उच्च पदमा रहि लामो समयसम्म काम गर्नुभएको बैंकर विकास बैंकमा सिइओ भएर आउनुभयो तपाई आएको एक वर्षबीच मै राइजिङ डेभलपमेन्ट बैक र एनडिइपी डेभलपमेन्टबीच मर्जर भयो र अहिले देवः विकास बैंक बनेको छ यसको वित्तिय अवस्था कस्तो छ त ?
म यस बैंकमा आउँदा यस बैंकलाई मर्जरको जरुरी थियो कि पुँजी बढाउनु पर्ने अवस्था थियो । प्रष्टै भन्नुपर्दा त्यसबेला राइजिङ डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर गर्ने निर्णय नै भएको अवस्था थियो । म आएको १ वर्षभित्र बैंकमा धेरै सुधार भए बीचमा खराब अवस्था पनि थियो । तर बीचमै सेटल भएको थियो मर्जर मै जानुपर्ने अवस्था त्यति थिएन । आवश्यकताको हिसावले तर राइजिङ डेभलपमेन्ट बैंक राम्रो बैंक भएको हिसावले र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने थियो । धेरै बैंक र वित्तिय संस्था भए मर्जर गर भनेर राज्यले भनिरहेको अवस्थामा हामी मर्जरमा गएका हौ ५८ करोडको पुँजी भएको बैंक ८२ करोड पुँजी पु¥याएका छौं मर्जरपछि १९ वटा शाखाबाट ३५ वटा शाखा पुगेको अवस्था छ हाम्रो लोन, नेटवर्क, पुँजी सबै बढेको अवस्था छ यसले मजवुत विकास बैंक बनेको छ । त्यसकारण यसलाई वाणिज्य बैंक बनाउने मेरो चाहना छ सोच छ ।
– तपाईले वाणिज्य बैंक बनाउने चहाना र सोचको कुरा उठाउनु भएको छ यो राम्रो कुरा हो तर कसरी बन्ने हो वाणिज्य बैंक पुँजी बढाएर वा फेरि मर्जर गरेर ?
मैले भन्न खोजेको यस्तो हो अब हामी ठूलो विकास बैंक भएका छौं अब हामी हाम्रो भूमिका देखाउँदै वाणिज्य बैंकसँग मर्जर भएर वा विभिन्न विकास बैंकसँग मर्जर गरेर नै जाने हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित जाँदैनौ । हामी अब पछि हाम्रो मूल्यांकन अनुसार हाम्रो पूँजी र लगानी, शाखा सञ्जाल देखाउँदै हाम्रो शेयरको राम्रो मूल्यांकन भए वाणिज्य बैंकसँग मर्जर मै जाने छौ भन्न खोजिएको हो ।
– भूकम्प गएपछि तपाईको बैंकले राज्य र भूकम्प पिडितलाई कस्तो सहयोग ग¥यो ?
हाम्रा ९० प्रतिशत शाखा भूकम्प पिडित जिल्ला मै परेको छन् त्यस्तो ठाउँमा गएर मैले निरीक्षण गरे जलविरे जहाँ हाम्रो शाखा खोला र पहाडको बीचमा छ यो शाखा पूर्ण क्षति भयो यसलाई सारेर काम गरेका छौ तर पछि हामी जलविरेमा शाखा पुनस्थापना गर्ने नै छौ । यसले त्यस क्षेत्रका भूकम्प पिडितलाई सेवा र सहयोग पुग्ने छ । अर्को कुरा हाम्रो बैंकले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हामी १० लाख दिएका छौं । कर्मचारी पीडित छन् उनीहरुलाई ६ लाख ५० हजार सहयोग गरेको अवस्था छ ।
– विकास बैंक गाउँ गाउँमा अहिले पुन निर्माणमा तपाईहरु जस्ता विकास बैंकहरुले धेरै योगदान पु¥याउन सक्दछ । अहिले राष्ट्र बैंकले तपाईहरुलाई निव्र्यजी पैसा दिँदैछ त्यो पैसा तपाईहरुले २ प्रतिशत व्याजमा भूकम्प पीडितहरुलाई लगानी गर्नुपर्ने छ त्यो सम्भव होला ? जवकी २ प्रतिशतमा तपाईको कस्ट पनि उठ्दैन यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो हेर्न नै बाँकी छ । त्यति सजिलोसँग लगानी गर्न सकिएला जस्तो छैन । तापनि एउटा पोलिसी आउने नै छ मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने २ प्रतिशतको लगानी छ यसमा म सकारात्मक छु । बैंकहरुले जति पनि व्याज लिने कुरा छ त्यो ठिक थिएन अहिले २ प्रतिशत मै दिने कुरा छ यो विपत्तिमा दिइने राहत हो यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । हामीहरुले मिल्ने र हुने गरि लगानी गर्न तयार छौ । हामी टे«जरी बिलमा ०.०२ प्रतिशतमा त लगानी गरेको अवस्था छ भने यो त ठूलो कुरा हो । राज्यले गर भनेको छ भने कि पछि हट्ने ?
– अबको लगानी अवसर हो कि चुनौति यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
अहिले असार मसानत आएको छ । वर्षा सुरु भएको छ । अबको २÷३ महिनापछि यस बारेमा भन्न सकिन्छ । अहिले नै यस्तो भन्नु अलिक उपयुक्त नहोला कि ?
– अब कृषि र ऊर्जामा लगानी बढ्ने हो कि के हो ?
कृषि र ऊर्जा लगानी बढ्ने छ । ऊर्जामा त बढेको छ ऊर्जामा डराउनु पर्ने अवस्था छैन त्यति धेरै क्षति भएको छैन कृषि प्रधान देश नेपाल कृषिमा त लगानी बढाउनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले पनि कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउने कुरा उठाएको छ नि ।
– राष्ट्र निर्माणको लागि बैंकरहरुको चाहि कस्तो भूमिका हुनुपर्ला त ?
जहिले पनि हामी बैंकरहरु सामाजिक दायित्वमा लागेकै छौं । बैं,क विकास बैंकले गरेका छन् यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका धेरै काम गरेका छन् । हामीले त गाउँ गाउँमा दुर्गम ठाउँमा शाखा खोलेर कर्जा दिएका छौं डिपोजिट लिएका छौं सेवा दिएका छौं वाणिज्य बैंक नपुगेको ठाउँमा विकास बैंक पुगेको छ । त्यसकारण अब हाम्रो दायित्व अझै बढेको मैले महसुस गरेको छु भूपेन्द्र जी ।
– अन्त्यमा बैंक अब देवः विकास विकास बैंक बनेको छ यसका ग्राहक, कर्मचारी, प्रमोटर र शेयरधनीहरुलाई केही भन्नु छ कि ?
प्रष्ट भन्दाखेरी राइजिङ र एनइडिपी बैंक राम्रा बैंक थिए अझै मजवुत बन्न हामी मिलेर देवः विकास बैंक भएका छौं प्रमोटरहरुलाई हामी लाभांश दिन्छौ । शाखा बढेको छ । मर्जरपछि अब जनताको सेवामा हामी लाग्ने छौ । देवः विकास बैंक एउटा असल बैंक बन्ने छ सबै कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोवलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दछु । ग्राहकहरुलाई निर्धक्क भएर हामीसँग कारोबार गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु । हामी अरु बैंक र विकास बैंकले दिएका सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिन तयार छौं भन्न चाहान्छु ।